Model89: Rindrambaiko AI marketing ho an'ny doka nomerika | Martech Zone
Zoma, Jona 21, 2019 Zoma, Jona 21, 2019 Douglas Karr
Roa taona taorian'ny nanombohany tamin'ny studio studio Alfa avo, Ny sehatra marketing marketing an'ny Pattern89 dia mamoaka haingana ny automatisation vaovao ho an'ny doka Facebook, Instagram ary Google.
Rindrambaiko AI marketing an'ny pattern89 manambatra ny herin'ny fianarana milina amin'ny angona dokam-barotra tsy mbola nisy toy izany. Izy io dia mamantatra sy mamakafaka ireo lamina angona izay hanatsara ny valin'ny fampielezan-kevitra. Ity fanadihadiana tsy tapaka ity dia mitazona ny doka nomerika fanavaozana sy fanavaozana hatrany ny fampisehoana.
Amin'ny alàlan'ny fanombohana ny bokotra "Do This For Me", Pattern89, dia mahatonga ny fanaovana dokambarotra nomerika mahomby kokoa- ary marani-tsaina noho ny hatramin'izay. Anisan'izany ny:
Hevitra momba ny doka ara-tsosialy
Ny Model89's AI dia manolotra ny tsara indrindra amin'ny mpanao dokam-barotra fahitana doka ara-tsosialy satria manana fidirana amin'ny angona betsaka indrindra izy io. Isan'andro dia mamakafaka singa 2,900 isaky ny doka ho an'ny mpanjifa izy io, miaraka amin'ireo teboka angona an'arivony tapitrisa hafa. Ity famakafakana lalina sy isan'andro ity dia mampiseho ny fanavaozana tsara indrindra sy ara-potoana indrindra ho an'ny doka Facebook sy Google.
Natolotra ho fanairana ny fanatsarana
Ny AI dia mahita lamina misy statistika lehibe amin'ny angona dokam-barotra, ary mamaritra ny fomba fampiasana ireo lamina ireo mba hampitomboana ny fahombiazan'ny doka. Manolotra ireo fanavaozana ireo ho an'ny mpanjifa toy ny fanairana isan'andro izy ireo, amin'izay afaka manana doka foana izy ireo izay manome ny vokatra tsara indrindra.
The Mpamorona drafitra manadihady singa an-tsary an'arivony isaky ny doka tsirairay ary mamantatra izay lafiny famoronana– ao anatin'izany ny kopia, ny loko, ny sarin-tarehy, ny endrika tarehiny ary ny maro hafa– manako ny ankamaroan'ny mpanatrika hahatratra tanjona kendrena.
Bokotra "Ataovy ity ho ahy"
Tao anatin'ny hetsika hamonjy fotoana bebe kokoa amin'ny mpanao dokambarotra, dia nanatanteraka ny “Ataovy ho ahy ity”Button. Mampihatra ho azy ny fanatsarana ny tanana teo aloha izay mety maharitra ora maro isan-kerinandro.
Miaraka amin'ny roa tonta marika ary sampan-draharaha mahita fahombiazana amin'ny sehatra AI ho an'ireo mpanao dokam-barotra, manolotra fisedrana maharitra roa herinandro i Pattern89.
Atombohy ny fitsapana maimaimpoana anao
Tags: ad aifanandramana dokaaifahaizana artifisialydoka niomerikafanandramana doka niomerikafanandramanaalpha avooctivquantifiquantlifi